एयरपोर्टमा सामान ल्याउन गरिएको कडाइ कस्तो लाग्यो ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः फाल्गुन २०, २०७५ - साप्ताहिक
नेपालमा नियम–कानुनलाई सजायका रूपमा लिइन्छ, यस्तो नियम–कानुन त सबै देशमा हुन्छ, मात्र कुन सामान कति परिमाणमा ल्याउन पाइने भन्ने हो ।
सकारात्मक रूपमा लिऊँ भने त्यो बढी भा’को सामान पुलिस र कर्मचारीले आपसमा बाँडछन्, होइन भने कता जान्छ त्यो भन्दिनुप¥यो । विदेशको एयरपोर्टमा सामान बढी नहुने, नेपाल आएपछि एकाएक बढी र गैरकानुनी हुने ? एयरपोर्टबाट सामान चोरी भएको समाचार बेला–बेलामा आइरहेको हुन्छ, बरु त्यसमा कडाइ गर्नुप¥यो । खोइ त आजसम्म सामान चोरी गर्ने एयरपोर्टका कर्मचारीलाई कारबाही भयो भन्ने सुनिएको छैन क्यारे !
आफ्नो मेहनतको कमाइले घरपरिवारका लागि सामान त ल्याउन पाउनुप¥यो नि । लुटे–चोरेको भए छुट्टै कुरा, यदि तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी ल्याइएको छ भने पनि कर तिरेर भित्राउन दिनुपर्छ, जफत गर्नु भनेको त लुट अनि दादागिरी होइन र ?
नियम हुनु र त्यो नियम लागू हुनु राम्रो हो तर सानालाई ऐन ठूलालाई चैन हुनु भएन ।
ठूला माछा छोडेर भुरा माछा समात्ने काम बन्द गरियोस्, जनताको गुनासो यही हो ।
यो नियम श्रम गर्न विदेश गएका नेपालीलाई होइन, भिजिट र व्यापारका लागि विदेश जानेहरूमा लागू गर्नुपर्छ । छाक टार्न विदेश गएकाले त्यस्तो अवैधानिक सामान के नै पो ल्याउँछन् र ? तर यहाँ ठिक उल्टो हुन्छ– क्विन्टलका क्विन्टल सुन त्यहीँबाट तस्करी हुन्छ तर श्रमिकले आफन्तका लागि भनेर ल्याएको उपहार जफत गरिन्छ ।
मैले त खासै नकारात्मक रूपमा लिएको छैन यसलाई । एक–एक थान ल्याउन दिएकै छ त । किन तोकिएको भन्दा बढी सामान ल्याउन मरिहत्ते गर्नु ? सबैथोक नेपालमै पाइन्छ । फेरि मानिसको रोइकराइ भनेको अरुमा छैन, रक्सीमै छ । विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमै खर्च गर्नु उपयुक्त होइन र ?
बढी सामान नलगे कसैलाई भावनात्मक अनि आर्थिक क्षति पुग्दैन भने निषेध नगरिएका सामान बढी ल्याउन चाहे सामानको भन्सार तिरेर बिना झन्झट ल्याउन सकिन्छ ।
आफ्ना जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचना दिनुपर्छ । कुन सामानमा कति कर तिर्नुपर्छ भन्नुपर्छ । त्यसपछि कडाइ गर्नु ठीक हो तर मनपरी कडाइ र कर्मचारी मोटाउने शैली ठीक छैन ।
एयरपोर्टमा कडाइ गरेको त राम्रो हो, तर ३३ किलो सुन भित्रिन सक्ने एयरपोर्ट, नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती भित्राउन सक्छु भन्ने चाल्र्स शोभराजको भनाइलगायत थुप्रै कान्डले बदनाम भएको छ । पहिले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुप¥यो नि † यो सोझासाझालाई मात्र नभएर नेतादेखि तस्कर सम्मका लागि हो भनेर, अन्यथा यी सब कदम बकबासमा मात्र सीमित हुन्छन् ।
आज यो देशको काम गर्न सक्ने उमेर समूहका लगभग ४० प्रतिशत मानिस भारत लगायत तेस्रो देशमा छन्, तिनैले ल्याएको रेमिटेन्सबाट देश चलेको छ, मेरो विचारमा तिनिहरूले आफ्नो घरका लागि ल्याउने २÷३ वटा मोबाइल, २÷४ जोर कपडा, ३÷४ वटा ज्याकेट, जुत्ता आदिमा आँखा गाड्नु हुँदैन । सुन र कानुनी रूपमा निषेध नगरिएका सामानमा सरकार लचिलो हुनैपर्छ ।
व्यक्तिगत हितका लागी हो भने ल्याउन दिनुपर्छ, समग्र देशका लागि सोच्ने हो भने ल्याउन दिनु हुँदैन । कडाइ गरिएका रक्सीजन्य पदार्थ एवं इलेक्ट्रिक सामानमा हो जुन नेपालमै किन्न सकिन्छ, केही महगो पर्ने मात्र हो । विदेशमा दुःख गरेको पैसा विदेश मै सकियो भने देश कहिले सबल हुने ?
एयरपोर्टका कर्मचारीले तलबमा मात्र काम गर्न थालून् । यात्रुको समान नहराओस अनि सुन तस्करहरूलाई सजाय होस् । त्यस्तो स्थितिमा विदेशमा काम गरेर फर्कनेहरूले पनि आफूले ल्याएको समानको भन्सार तिर्दा दुःख मान्ने छैनन् ।
यो त विदेश गएर काम गरेकाहरूको खुन–पसिनाको कमाइ लुटेर कर्मचारीहरूलाई पोस्ने बाटो मात्र हो । यस्तो नियमले न देशलाई राम्रो हुन्छ न त जनतालाई नै ।
टनका टन सुन आउँदा नदेख्ने सरकारले बिदेसिएका युवा–युवतीले व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि ल्याउने सामान्य समान जफत गर्ने रे । वा ! हामी नेपालीले क्या गजबको सरकार पायौं ।